०७८ भदौ ०३ गते विहिबार ई.सं. २०२१ अगस्त १९ ​तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य – Kavrepati
Home / समाचार / ०७८ भदौ ०३ गते विहिबार ई.सं. २०२१ अगस्त १९ ​तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
०७८ भदौ ०३ गते विहिबार ई.सं. २०२१ अगस्त १९ ​तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
admin August 19, 2021	समाचार Leaveacomment 107 Views
पढाई लेखाईमा मन जाने तथा भनेजस्तो नतिजा हात पार्न सकिनेछ । माया प्रेम सुमधुर हुनेछ भने विभिन्न वस्तु तथा उपाहार प्राप्त हुनेछ । व्यवसायकै सवालमा रमाईलो यात्रा गर्न सकिनेछ । आफन्त तथा सन्तानको प्रगतिमा मन रमाउनेछ । वौद्धिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्र फराकिलो हुनेछ भने तपाईको प्रश्तुतिले सबैको मन आकर्षित गर्नेछ।
सजक नबन्दा आफन्त टाडनेछन् भने अध्ययन तथा कामको शिलशीलामा कष्टकर यात्राको तय गर्नुपर्दा मन खिन्न हुनेछ । व्यापारमा मन्दी भएपनि कृषी तथा पशुपालन व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला । छोटो समयका लागी हेरिने फाईदाले पछी लाई घाटा हुन सक्छ । योजनाहरु तत्काल सार्वजनिक नगर्नु नै उत्तम हुनेछ।
आफन्त तथा साथी भाईबाट टाडिनु पर्दा मन खि न्न हुनेछ। धो का दिने तथा आशा देखाउनेहरु सक्रिय हुनेछन् । कार्यक्षेत्रमा आलोचना गर्नेहरुबाट सजक रहनुहोला । स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला औ ष धि उपचार खर्च बढ्नेछ । अध्ययनमा मन नजादा अरुभन्दा पछि परिनेछ। तरपनि यात्रा हुने तथा विदेशी सामानको व्यापार फस्टाएर जानेछ।
Next आज बाट सधैंका लागि निभे एउटा नेपालका चम्किला तारा !